२ मिनेट समय दिएर अवश्य पढ्नुहोला : तपाईंको जीवनमा पक्कै परिवर्तन आउनेछ ! - Nepali in Australia
May 14, 2021 autherLeaveaComment on २ मिनेट समय दिएर अवश्य पढ्नुहोला : तपाईंको जीवनमा पक्कै परिवर्तन आउनेछ !
जतिबेला तपाईंको मृ:त्यु हुन्छ त्यही समयदेखि तपाईंको पहिचान एक ला:स बन्न सुरु गर्छ । अरे … ला’स लिएर आउनुहोस्। … ला’स लाई उठाउनुहोस्। .. ला’स लाई सुताउनुहोस। यस्तै शब्द ले तपाइँलाई बोलाउछन ति मान्छेहरूले तपाइँलाई तपाईंको नामले बोलाउने छैनन्, जसको लागि तपाईंले आफ्नो सम्पुर्ण जिबन बिताउनुभयो ।
किनकि मृ त्यु जिबनको सबैभन्दा ठूलो ला”स होइन । ला’स त त्यो हो, तपाईं जि’उँदो भएर पनि तपाईं भित्र जिन्दगी जिउनुको आशा हराउदै गएको छ हरेक पल हाँसी खुशी जिन्दगी बिताउनुलाई नै जिन्दगी भनिन्छ।जिन्दगी थोरै छ, हरेक पल म खुशी छु. काम मा खुशी छ, आराम गर्दा खुशी छु आज खाना मा मासु छैन, दाल मा पनि म खुशी छु आज गाडी छैन,
हिडेर जान पनि म खुशी छु साथिहरुको साथ छैन, एक्लै पनि खुशी छु, आज कोही रिसाएको छ, उ रि:साएको छ मलाई थाहा भएर पनि म खुशी छु।जसलाई देख्न सक्दिन, उसको आवाज सुनेर पनि खुशी छु। जसलाई पाउन सक्दिन, उसको बारेमा सोचेर पनि म खुसी छु।